Ciidan lagu laayay duleedka magaalada Balcad | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamada milatariga ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan magaalada Balcad ayaa weerar gaadmo ah oo lagu soo qaaday lagu dilay tiro kamida ciidamadaasi.
BALCAD, Soomaaliya - Weerar ay soo qaadeen kooxo hubeysan oo loo maleynayo in ay yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa wuxuu ka dhacay duleedka magaalda Balcad ee gobolka Shabeelaha Hoose, halkaasoo sida la xaqiijiyay ay ku dileen tiro kamida ciidamada Milatariga ee fadhigoodu yahay magaalda Balcad.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay laamaha ammaanka iyo maamulka magaalada Balcad oo ku aadan weerarka oo ka dhacay duleedka magaalda. balse warar lagu kalsoonaan karo oo ay heshay Keydmedia Online ayaa waxay xaqiijinayaan in ilaa toddobo askari lagu dilay weerarka oo ahaa gaadmo.
Ciidamo hubeysan ayaa gubay hal gaari, waxayna dileen ku dhawaad toddobo askari oo marayay waddo inta badan ay ciidamadu ku safraan, kooxda Al-Shabaabna ay ugalaan ciidamadaas oo ay halkaas horay ugu dileen ciidamo milatari ah, hubkoodiina kaga furteen.